Gbasara Anyị: APLUS Global Ecommerce
Otu ìgwè ndị ọkachamara nwere ịnụ ọkụ n'obi nwere nkà na-ahịa na-eme obi na mkpụrụ obi Aplus Global Ecommerce. Anyị kwenyere na ịmepụta gburugburu e-Azụmaahịa na-eme nke ọma, na-arụ ọrụ kwa ụbọchị, na ụbọchị iji nye ndị ahịa ọrụ kachasị mma. Anyị na-enye ndị kacha mma Amazon Sellers Account Reinstatement Services.
Otu ụlọ ọrụ nke na-ahụ maka azụmaahịa ahụike dị mma, ahịa asọmpi, yana ụwa na-aga nke ọma oge niile, A Plus Global e-commerce bụ otu n'ime ụdị ebe enyere ndị azụmaahịa dị n'ịntanetị aka ịgba ọsọ nke ọma. Anyị na-enye ndị ụlọ ọrụ e-Commerce ọrụ 360 Celsius. Site n'inyere azụmaahịa e-Azụmaahịa nwere akaụntụ ndị na-ere ahịa dị mma ka ị nwetaghachi akaụntụ ndị na-ere ahịa amazon, anyị nwere azịza maka mmadụ niile. Ebumnuche abụghị naanị inyere azụmahịa aka ime nke ọma na ahịa dịka Amazon kamakwa ịmepụta niche ha na ụwa nke e-azụmahịa. Anyị na-anwa iweta azụmaahịa dị larịị na ụzọ na-abawanye ngwa ngwa nke ụwa e-Azụmaahịa ma chọpụta ọtụtụ ihe. Ọrụ anyị kachasị mma n'ahịa na-eme A Plus Global ka ọ bụrụ ụlọ ọrụ tụkwasịrị obi. Anyị nwere ndị otu aka ahọtara aha ha sitere na nzụlite dị iche iche wee nwee nka teknụzụ nke achọsiri ike na ahịa. Iguzosi ike n'ezi ihe ha na nraranye ha na-abawanye uru na ọrụ ndị ahụ, nke ahụ bụkwa USP nke A Plus Global e-Commerce. Ọrụ 24 awa emerela nke ọma na ịghachite akaụntụ Amazon Seller na-ama nke ọma. Ọrụ nlekọta ahụ ike na akaụntụ nlekọta ahụ ike kwesịrị ịnwale. Na-ekpuchi ọtụtụ ọrụ, anyị na gị na-arụ ọrụ na mpaghara anọ sara mbara:
Ọrụ ịrịọ Amazon - anyị na-enyere gị aka ire gị ọzọ n'ime awa 24
Ahụ ike akaụntụ ndị na-ere ahịa - anyị na-edebe ahụike akaụntụ gị n'ime oke yana nka anyị
Nkwado azụmaahịa na ire ahịa - anyị n’enyere gị aka itolite, ọbụghị naanị ịkwagide
Weebụsaịtị na ngw mmepe- anyị na-enye gị ikpo okwu gị iji rụọ
Anyị na-enye ọrụ ahaziri iche na nchịkọta kachasị mma maka mkpa gị, jikọtara ya na iwu nke ngalaba. Nlekọta maka ndị ahịa na-agbasa n'ụwa niile, A Plus Global na-enye ọrụ ndị kachasị mkpa dị ka "Ntinye Akaụntụ Akaụntụ Amazon" nke ndị na-ere ahịa gị chọrọ site na nraranye, nka, na nkà nke otu anyị.